XOG: Mooshin lacag badan lagu bixiyay oo laga diyaariyay Farmaajo iyo Dadkii dambeeyay oo la ogaaday – Kismaayo24 News Agency
XOG: Mooshin lacag badan lagu bixiyay oo laga diyaariyay Farmaajo iyo Dadkii dambeeyay oo la ogaaday
by admin 2nd December 2017 2nd December 2017 027
Guuxa Mooshin Ka dhan ah Mas’uuliyiinta sare ee dowladda federaalka oo muqdisho laga dareemaayo 24-kii saac ee u dambeysay iyadoona hotelada muqdisho ay ka socdaan shirar gooni gooni ah .
Mooshinka waxaa laga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamad cabdullahi farmaajo waxaana wararka hordhaca ah ee aan helay ay sheegayan in mooshinka ay dabada ka riixayan shaqsiyaad siyaasiyiin ah oo Imaaraadka ka shidaal qaata iyo xildhibaanno dibad joog u badan oo dalka kusoo laabtay.
Saxiixa mooshinka hadda wuxuu maraya lacag dhan 10,000$ Tobban kun oo dollar waxaana xildhibaanada lagu qal qaalinaya in ay saxiixaan mooshinkaan lacagta adag lagu bixinaayo si dalka rabshado siyaasaddeed loo galiyo.
Lacagta lagu saxiixaayo mooshinka waxaa la filaya in ay intaan kasii badato oo ay gaadho 50,000 $ Sida aan xogta ku helay.
Madaxtooyada soomalia ayaa wada qorshihii ay ku kala fur furi laheyd is baheysiga mooshinkaan wada iyo xildhibaanada lagu qanciyaano in ay saxiixaan mooshinkaan madaxweynaha looga soo horjeedo waxaana VIlla soomalia ka socda kulamo xasaasi ah oo mooshinkaan looga arinsanaayo.
Xildhibaano aad u badan oo taageersan madaxweyne farmaajo ayaa dhankooda waxa ay kulamo goon gooni ah ka wadaan muqdisho si loo kala fur furo xildhibaanada mucaaradsan dowladda ee mooshinka diyaarinaya.
Daawo :- Xildhibanada Beesha Daarood oo war adag ka soo saaray Mooshinka ka dhanka ah Xukuumadda Khayre.
War cusub: Musharax Caddow Cali gees oo jawaab deg deg ah u diray Xasan shiikh iyo Kooxda Villa soomaliya been abuurka ka dhex wada
Tifaftiraha K24 7th February 2017
Deg-deg: Dagaal Beeleed Markale dib uga qarxay Deegaano Ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Daawo: Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thabit Abadi oo Fariin Muhiim ah u diray hey’addaha Ammaanka